Shakhsiyaadka iyo Ganacsiyada Yaryar - Milyan sameeyeyaal
Shakhsiyaadka iyo Ganacsiyada Yaryar
Waxaan nahay ururro bixiyeyaasha adeegga caalamiga ah shakhsiyaadka / dadka / Ganacsiyada iyo qoysaska u baahan talo iyo la tashi xagga arrimaha ah sida Socdaalka, Waxbarashada, Aasaasidda Ganacsiga, Adeegyada Shaqada, Meelaynta Caalamiga, Adeegyada Sharciga, Caawinta Visa, La-talinta Maaliyadeed, La-talinta Guriyeynta, Foomamka Shirkadaha Caalamiga ah, Furitaanka Akoonnada Caalamiga ah, Diligelinta Saboolnimada, Dibad-u-Kicinta, Diiwaangelinta Ganacsiga, Xallinta HR Loogu talagalay, Xafiiska Virtual, Oggolaanshaha Shaqada, Barnaamijka Maalgashiga Maalgashiga, Xalka Maalgelinta Ganacsiga, Maalgelinta Qalabka, Qiimaynta Ganacsiga, La-talinta Meheradda, Dibedda Shaqaalaynta, Xallinta IT , Diligence iyo u hogaansanaanta.
Waxaan u abuurnaa fursado shaqsiyaadka iyo shirkadaha si ay ugu helaan nolol wanaagsan naftooda.
Waxaan had iyo jeer kuu noqon doonnaa la-taliye aad ku kalsoon tahay muddada dheer.
Iyada oo loo marayo waayo-aragnimadeena ballaaran iyo adeegyada kala duwan ee ay bixiso shirkaddeenna, waxaan ka caawinnaa milkiileyaasha ganacsiyada madaxbannaan oo ay weheliyaan qoyskooda inay sameystaan ​​shirkad ayna dejiyaan ganacsi cusub, ballaadhiyaan, koraan oo ay sii wadaan ganacsiyadooda, waxaan si fiican u dejineynaa inaan kugu hagno jidka guul. Haddii aad xiiseyneyso M&A, guur, adoo raadinaya inaad dib ugalaabato xafiiska minutia, raadinta raasumaal ama lammaane istiraatiiji ah ama raadinta qorshahaaga jiilka xiga. Taasi waa wax yar oo inaga mid ah.
Iyada oo loo marayo khibradeena ballaaran, khibradda iyo adeegyo badan oo ay na siisay ururkeena iyo shirkadaheena, waxaan gacan ka geysanayey una fududeynay milkiilayaasha ganacsiga, shirkadaha iyo xornimada, iyo sidoo kale qoysaskooda si ay ugu biiriyaan shirkada isla markaana u aasaaso ganacsi cusub, ballaariyo, u kobcaan una sii wadaan ganacsigooda ama shaqo raadinta, waxaan si wanaagsan kuugu hananay inaan kugu hagno dariiqa guusha.
Haddii aad xiiseyneyso isku dhafka iyo helitaanka, dib u dejinta, aad rabto inaad dib uga laabato howlaha xafiiska iyo howlaha, iskuday inaad hesho raasamaal ama lammaane istaraatiiji ah ama aad raadineyso qorshe jiilkaaga xiga, ama aad raadsato la-talin guryeyn ama Adeegyada Socdaalka ama Dibadda Waxbarshada ama IT dibadda ama IT Adeegyada aan kaa caawin karno dhammaan adeegyada sida kor lagu soo sheegay.
Xalalkayada hal abuurka leh waxaa ka mid ah:
Soojeedinta socdaalka iyo taageerada la awoodi karo.
Qeexitaanka Waqtiga loo maro hawlgal kasta.
Qaab dhismeedka shirkada ayaa la fududeeyay.
Sii sawir cad oo ku saabsan kharashyada dheeraadka ah, wax shoog qarsoon ah.
Caawinta xisaabta bangiga ee furitaanka kaasoo ah arin adag oo ku nool wadan kasta oo cusub.
Fursadaha isku dhafka iyo helitaanka.
Fursado dib loogala wareego xafiiska dambe
Adeegyada IT-ga, sida, Websaydhka ama Ecommerce Site
Saamilaha iyo heshiisyada xubnaha
Iibsashada guryaha iyo heshiiska kirada
Qabyo-qoraalka heshiisyada iyo heshiisyada
Sharci ahaan u hoggaansan sharciyada hawlgalka iyo buugaagta shaqaalaha
Oo sidee ka badan
Talaabo talaabo talaabo - Laga bilaabo bilow ilaa guul
Waxaan kula shaqeyneynaa si aan u qeexno qorshe kaa caawinaya ka faa'iideysiga kartidaada / duruufahaaga / awooddaada dhaqaale si aad u xaqiijiso yoolalkaaga iyo himilooyinkaaga. Ugudambeyn yoolkeennu waa inaan hubinno inaan bixinno nooca adeegga ee sida ugu fiican adiga, qoyskaaga iyo hay'addaadaba u shaqeynaya, waxaan diyaar u nahay inaan mid-mid u wada shaqeyno, qof ahaan iyo taleefan ahaan, skype, viber, whatsapp, oo weligood ah habka isgaarsiinta ayaa adiga kugu habboon.
Aasaaska shaqadeena waxay ku saleysan tahay wax aan caadi aheyn oo aan sameyno waxa ka dhex jira danaha ugu fiican ee macaamiisheena.
Waxaan ku faanaynaa nafteena googoynta kakanaanta, oo aan badbaadineyno dhammaan qeybaha kala duwan ee tamarta iyo waqtiga.